Sawirro: Xaflad lagu taageerayay musharaxa xildhibaan qaran ee Samra Ibraahim Cumar oo ka dhacday Baydhaba
arlaadi August 7, 2016 No Comments
Munaasabad ay ku shaacinaysay musharaxnimadeeda ayay Samra Ibraahim Cumar ku qabatay Magaalada Baydhaba , waxaana kalasoo qeyb galay mas’uuliyiin katirsan Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isugu jiray Wasiiro, Xildhibaano, Agaasimayaal.
Waxaa sidoo kale kasoo qeyb galay qaar kamid ah Ururka Haweenka, Odayaal Dhaqameed iyo Aqoonyahano.
Gudoomiye Ku-xigeenka Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur (MMI) ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Samra Ibraahim iskusoo taagto xubin Xildhibaan, isagoo ku ammaanay inay tahay qof u qalma booskaas oo lagu aamini karo dadka iyo dalka, waxuuna balanqaaday inay ku taageeri doonaan sidii ay uga guul gaari lahayd hamigeeda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Aamina Isaaq Duubane oo kamid ah barlamaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay inay aqoon durugsan u leedahay Samra Ibraahim Cumar iyo doorka ay bulshada kaga jirto, iyadoo qirtay inaanu jirin cid maanta kaga mudan in lagu taageero xilkaan, waxayna intaas ku dartay in loo baahan yahay dad iyada lamid ah inay u tartamaan Masiirka Soomaaliya, si loo helo Xildhibaano qaran oo u adeegaya Danta Bulshada ay ka yimaadeen.
Faadumo Maxamed Xuseen Abuukar (Faayow) oo kamid ah Wasiirada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay iyadoo ku hadlaysay afka Haweenka Dowladda ku jira inay soo dhoweynayso cid walba oo tayo leh oo bulshada wax usoo qabatay sida Samra Ibraahim oo kale, waxayna cadeysay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin sidii Samra iyo dadka la midka ah siyaasada Soomaaliya ugasoo dhex muuqan lahaayeen.
Musharax Samra Ibraahim Cumar oo iyaduna goobta ka hadashay ayaa u mahad celisay dhammaan dadkii ku dhiiri geliyay inay iskusoo sharaxdo jagadaan iyo kasoo qeyb galayaasha xaflada.
Samra waxay sheegtay sababta ay isugusoo sharaxday xilkaan inay tahay dhowr arrimood oo kala ah, inay kor u soo qaado xuquuqda haweenku ku leeyihiin wadanka, inay ka shaqeyso sidii loo heli lahaa xuquuqda Koonfur Galbeed ku leedahay Dowladda Federalka Soomaaliya iyo inay noqoto Xildhibaan ku shaqeeya talada Shacabka Reer Koonfur Galbeed Soomaaliya lagalana xisaabtamo wixii loo dirsaday.
Samra Ibraahim waxay sheegtay in kudhow Toban Sano inay kasoo shaqeynaysay horumarinta Arrmaha Bulshada, islamarkaana ay kaalin weyn kasoo qaadatay dib u heshiisiinta shacabka iyo dhisidii Dowlada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Xildhibaan Cali Isaaq oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa si diiran u soo dhaweeyay Musharax-nimada Samra Ibraahim wuxuuna sheegay Samra inay kamid tahay gabdhaha farakutiska ah reer Koonfur Galbeed ee u sharaxan Xubin Xildhibaanimo islamarkaana tusaale u noqon doonta Haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ex-Xildhibaan Maxamed Cabdi Xamiid oo ugu danbeyn kamid ahaa Mas’uuliyiintii ka hadlay Xaflada ayaa ku Baaqay in la taageero Aqoonyahanad Samra Ibraahim Cumar iyo Hamigeeda Siyaasadeed, wuxuuna Bulshada beel weynta Geeladle ee ay kasoo jeeda ka codsaday inay kalsooni siiyaan oo ay ku aaminaan inay matali karto dadkeeda iyo dalkeeda.
Dadkii kasoo qeyb galay xafladaan ayaa dhammaantood si buuxda u taageeray Samra Ibraahim Cumar, iyagoo si guud ugu baaqay waxgaradka iyo Odayaasha Beesha Samra inay taageeraan codsigooda ah in musharaxada noqoto matalaha dadkeeda.